टाइगर श्राफको फिल्म मुन्नाको दोस्रो गीत सार्वजनिक, यस्तो छ फिल्मको कथा
टाइगर श्राफको आगामी फिल्म मुन्ना माइकलको दोस्रो गिता डिंगा डान्स आज रिलिज भएको छ । यसको पहिला मै हूँ गीत रिलिज भएको थियो जसलाई दर्शकले मन पराएका थिए ।
डिंगा डान्स एक नम्बर डान्स हो जसमा टाइगर तथा निधि अगूवाल दुवैको जोडदार नृत्य देख्न पाइन्छ । गीतलाई अहिले फिल्म प्रोड्युस गरेको कम्पनी एरोज नाउको साइटमा राखिएको छ ।
गीत हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
फिल्ममा टाइगर मुन्नाको भूमिकामा देखा पर्ने छन् । मुन्ना, माइकल ज्याक्सनको ठूलो फ्यान हुन्छ र उ जस्तै बन्न खोज्छ । निधि, टाइगरको गल्र्फेण्ड बनेकी छिन् । फिल्मा नवाजुद्दीन सिद्दकी पनि छन् जो गेस्ट रोलमा देखिएका छन् । असार ५, २०७४ मा प्रकाशित
प्रदेश ३ को समानुपातिकमा विवेकशीललाई ६ प्रतिशत मत : कति सीट पाउला ?
डेरा सरे प्रचण्ड, नयाँ घर कसको ?
प्रधानमन्त्री पद नछाड्न देउवालाई संविधानविद्को सुझाव, राष्ट्रपतिको आलोचना !
ऋषि धमलाको प्रश्नमा प्रचण्डको इसारा, ओलीले दिए यस्तो जवाफ काठमाडौं, २ पुस– नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको वाम गठवन्धनले आइतवार दिउँसो राजधानीको अन्नपूर्ण होटेलमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । दिउँसो २ बजेदेखि शुरु हु...